Moments Neshamwari 36
Sei gondo iri kushandiswa sechiratidzo chemarudzi akasiyana-siyana?
Zvinogona kuve kuti kwakasiyana-siyana chinangwa chakakurudzira kutora kwegondo sechiratidzo nenyika zhinji dzakazvitora. Asi zvakadaro zvinogona kufungidzirwa kuti zvakatorwa nekuti zvakanyatsomiririra chimiro nehurongwa, chishuwo, chimiro chemamwe marudzi akazvitakura sedanho ravo.
Gondo ndimambo weshiri uye yemudenga, seshumba zvinonzi zvine mutsa pakati pemhuka. Iri shiri yemubiro, asiwo yekukunda. Iri shiri rekutsungirira kukuru, rinogona kukurumidza uye rinobhururuka kutiza. Inobhururuka nekukurumidza pamusoro pokubata kwayo, inomuka nekukurumidza, ichikwira mukukudzwa pakakwirira.
Rudzi runoshuva simba, kutsungirira, ushingi, kukurumidza, simba, simba. Gondo rine zvese izvi kusvika pakakwirira. Zvine musoro kufunga kuti izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvakatungamira nyika kana madzinza kana vatongi kuti vatore gondo seyero yavo. Icho chokwadi ndechekuti chave chiratidzo cheazhinji emarudzi anokunda enguva yedu yenhoroondo, uye kunyanya yeavo vanoita zvehondo vari kure nemahara.
Izvi ndizvo zvehunhu hwegondo. Asi ndudzi dzinotora shiri iyi sechiratidzo chayo, kazhinji inokodzera kana kuhuisa hunhu hwayo kana chinangwa kana yakanakira kana neyemoto inoperekedza gondo kana kuisa chiratidzo mumakondo egondo kana mumuromo wayo, kunge davi, miseve, mureza, nhovo, tsvimbo, nemheni, chimwe nechimwe chazvo kana zvakasanganiswa nezvimwe zvinomiririra zvinomiririra chimiro cherudzi kana chimiro chinodiwa nenyika uye izvo zvinangwa zvayo.
Zvese izvi kubva pane zvinoshanda uye zvemukati mamiriro. Pane chimwe chiratidzo chegondo uko hunhu hwakafanana hungatariswe kubva pane hwamweya hwomweya.
Ndomumwe we "Zvipenyu Zvinorarama" zvinotaurwa muApocalypse zvinonzi zvinomira zvakatenderedza chigaro chaMwari. Gondo rinopihwa chiratidzo Scorpio yeZodiac. Iyo inomiririra simba remweya riri mumunhu. Gondo isimba, iroya remweya mumunhu rinogona kukwirira kumusoro. Rudzi kana murume anotora gondo sechifananidziro mune zvekunamata anovavarira kuwana nenzira yemweya zvese zvinomiririrwa negondo mukufananidzira kwazvakaita zvinhu. Iye anovavarira kukunda pane zvese zviri pasi pake uye anoshandisa simba rake kusimukira kumatunhu akakwirira. Nekutungamira iri simba rinomiririrwa negondo, iye anokunda zvishuwo zvake, anowana simba mudunhu remuviri wake waanokwira nawo uye, segondo, anogadzira imba yake mugomo kukwirira kwemuviri kumusoro kwecervical vertebrae. Saka anosimuka kubva kune chiratidzo Scorpio, iri iro rakadzika kwazvo kupera kwemuzongoza, kumusoro, uko kunotungamira mumusoro.
Iko kondo mbiri dzakagadzirwa ikozvino inoshandiswa sechiratidzo chenyika yeimwe nyika, uye inowanikwa pane zviyeuchidzo zvevaHeti vekare vezvinyorwa zveBhaibheri, zvese kune mamiriro ezvinhu evanhu here?
Kana gondo rine misoro miviri richishandiswa sechiratidzo chenyika dzimwe nguva rinofanira kushumwa pakati pezvimwe zvinhu zvinokarirwa, kuti nyika mbiri kana nyika dzakabatana seimwe, kunyangwe hazvo paine misoro miviri kuhurumende. Kunze kwekunge zvimwe zviratidzo zvaiperekedza gondo rine-musoro-miviri pane zvivakwa zvevaHeti vekare, chiratidzo ichi hachireve kune murume anonzi androgynous. Androgynous murume kana murume / murume / murume / murume, anofanira kusanganisira maviri mabasa, maviri masimba akasiyana yakatarisana. Gondo rine misoro miviri yakafanana muchimiro, sezvo misoro yacho miviri iri yemazondo. Kuti androgynous murume akamirirwe negondo, iro gondo rinofanira kuperekedzwa kana kubatana neshumba, iro, kunyangwe mune imwe nzvimbo yakasarudzika, rinomiririra pakati pemhuka izvo iro gondo riri pakati eshiri. MaRosicrucians ekare akataura nezve “Ropa reShumba Tsvuku,” pavaireva zvishuvo, kana chimiro chemhuka chiri mumunhu. Vakataurawo nezve "The Gluten of the White Eagle," nekwavaireva simba psycho-yemweya mumunhu. Idzi mbiri, iro ropa reshumba dzvuku, uye girazi regondo jena, ivo vakati, vanofanirwa kusangana uye kudzokorora uye varoore, uye kubva kumubatanidzwa wavo kunowedzera simba rakakura. Izvi zvinonzwika semarara asina chinhu chemwedzi kunze kwekunge chiratidzo chanzwisiswa. Kana zvirizvo, zvichaonekwa kuti ivo vakanzwisisa zvakanyanya nezve maitiro epanyama pane avakapihwa mukurumbira.
Ropa reShumba dzvuku ndicho chishuvo chinoshanda chinogara muropa remuviri. Iyo gluten yegondo chena iri muchikamu chayo chekutanga iyo lymph mumuviri. Iyo lymph inopinda mumoyo uye saka yakabatana neropa. Kubva mumubatanidzwa uyu pakazvarwa rimwe simba rinosimbisa kuchizvarwa. Kana iko kusimudzira uku kuchinakidza, maAlchemist akadaro, kuti shumba ichashaiwa simba uye gondo richarasikirwa nesimba rekusimuka. Kana, zvakadaro, iyo girazi rehena chena neropa reshumba tsvuku dzikagona kuramba dzichivhengana pamwechete pasina kupa maitiro, shumba yaizosimba uye iro gondo rine simba, uye simba rakazvarwa patsva kubva mukutanga kwavo kwaizopa udiki kumuviri uye simba kune pfungwa.
Izvi zviviri, shumba negondo, zvinomiririra misimboti iyi miviri, huwandu hwechikadzi uye hwemunhukadzi pamurume kubva pachidimbu chemuviri. Iyo androgyne imwe ine iyo yemasculine uye yechikadzi chimiro uye mabasa. Shumba negondo, iro ropa nerumbo, dzichigwinha mumuviri mumwechete uye kuita mabasa adzo kuburitsa simba idzva mukati memuviri uye pasina kupa nzira yekukurudzira kutaura kwekunze, gadzira simba idzva remuviri kubva kunozvarwa chisikwa chitsva chinogona kusimuka kubva pasi uye chichienda munzvimbo dzakakwirira.